Evinrude 3 HP Lightwin History | Outboard Boat Motor Mmezi
Evinrude 3 HP Lightwin History
Evinrude 3 HP Lightwin e mere si 1952 site 1967. Ọzọkwa dị site Johnson.
Ndị a na-ahịa dị ka obubu-tinyere egbu azụ n'ụgbọ mmiri Motors. OMC rere ọtụtụ iri puku ndị a na post-WWII oge a oge mgbe ndị mmadụ nwere oge ntụrụndụ na-enwe oké n'èzí. Otu nnukwu mkpesa bụ Motors ndị fechaa tụnyere ndị okenye ụdị. Dị ka niile Johnson / Evinrude Motors, nke a bụ ọnụ mbepụ technology n'oge ya ke ẹkenam ke 1952. Nke a bụ a dị nnọọ mfe moto e mere na-ịdabere na mfe na-arụ ọrụ. Mgbe ị na-ya iche, ị ga-ahụ na e nwere ọtụtụ ihe e wezụga n'ihi isi mmiri: mfe powerhead, magneto mgbanye, carburetor, na mmiri mgbapụta. Otu ihe m n'anya banyere nke a moto bụ na ọ bụ niile metal na dịghị plastic. Nke a bụ otu ihe ahụ e ejima cylinder abụọ okirikiri imewe-eji na ọtụtụ Johnson / Evinrude Motors site na afọ na ọbụna na-adịbeghị anya Motors. E nweghị ndị na Kwadobe ịgbanwee. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga na agbara, ị nanị atụgharị moto gburugburu azụ. M nụrụ ihe ndị a na-akpọ "n'ọdụ ụgbọ mmiri busters" n'ihi na ha enweghị anọpụ iche. Mgbe ị na sere eriri na-amalite, na propela na-ịtụ. Dịghị mgbe m chere banyere nke a dị ka a nsogbu ma ọ bụ chọrọ a shifter mgbe mbụ m nụrụ na-agba ọsọ a moto ka a nwata nwoke. Nke a moto ji 32 pound enweghị 2 / 3 galọn gas dị na ike ndọda nri tank n'elu. Nke a moto bụ dị nnọọ mma maka 16 'ewepụghị ike john ụgbọ mmiri anyị na-fished na, na ọ ga-asọ anyị tinyere na a ala na-agba. Ihe ọ bụla ibu gaara ukwuu ike na-mma dị otú ahụ a obere ụgbọ mmiri na ukwuu hassle messing a remote tank mgbe niile ị chọrọ ime bụ azụ. Motors ime tankị ka ihe ezi uche ma ọ bụrụ na ị nwere gị ụgbọ mmiri na a ụgbọala na-adọkpụ na ị na-adịghị kpamkpam butuo n'ụgbọ mmiri ọ bụla ha gara. Anyị obere ụgbọ mmiri ebuga isi n'ala on top nke ụgbọ ala. Messing a ihe mgbagwoju moto ga-dị nnọọ-ewe ogologo oge iji mara na ụgbọ mmiri na-esi na malitere ịkụ azụ. I nwere ike na-agba ọsọ a ogologo oge tupu agwụ na tank nke gas. Ị ga-abụ ịkpachara anya n'ihi na ọ dịghị ihe gosiri maka mmanụ ụgbọala larịị ọzọ karịa achọ na tank. Ị chọrọ iji jide n'aka na mmanụ ụgbọala ekupụ bụ oghe mgbe ị na-agba ọsọ na-moto. Ma ọ bụghị ya, ọ ga-akwụsị na ị na-mgbe a mgbe. Ị na-chọrọ ijide n'aka na ndị ekupụ a na-emechi mgbe ahụ ị ibufe na moto, otú ị na-adịghị a ọgbaghara na mbuaha mmanụ na gas esi ísì elu ala ụgbọ ala gị. M na-echeta na anyị na-eji emechi anya na mmanụ ụgbọala na n'akụkụ nke moto ma ka na-enwe ike ịga a di na nwunye nke narị mita n'ihu na-agba ọsọ na-engine akọrọ. Anyị na-enwe mmasị na-gas nke carburetor n'ihu ụgbọ njem ma ọ bụ na-akpakọba na-moto. Nke a moto bụ ihe pụrụ iche n'ihi na nke n'akuku nke propela aro. M na a gwara na nke a bụ otú ị nwere ike tilt moto elu na-agba ọsọ dị nnọọ na-emighị emi mmiri. M na-na a gwara ha na a bụ oké mma maka a ụgbọ epeepe moto n'ihi na ọ ga-enyere na-ụta site n'ịnọgide ogologo elu n'ime ikuku. The prop ndokwa e nwekwara kwesịrị ịbụ weedless. Na 1967, afọ ikpeazụ a moto, Evinrude ẹkenam a ịkpakọba lightwin. The mpịachi lightwin nwere a bụrụ na ị nwere ike na-ya na mgbe ị na n'ogige atụrụ ala unit. Ọ tụgharịrị na nke a abụghị ndị dị otú ahụ a ezi echiche n'ihi na aka mgbodo na-ekwe na ala unit n'ogige atụrụ ga-ịgbawa nrụgide. Ị zụrụ a ịkpakọba lightwin n'ihi na ọ bụghị a mma imewe atụmatụ. The mgbe lightwin Motors dị ukwuu, na ozugbo na-ekiri-elu, na-eleghị anya mma na 3 HP Motors ị pụrụ ịzụta taa.
1967 ịkpakọba Lightwin
3 awa 42 nkeji gara aga
21 awa 51 nkeji gara aga